KULMIYE Party » Xisbiga KULMIYE oo soo Dhaweeyey Ururka Dhallinyarada ee MIDNIMO[:] Xisbiga KULMIYE oo soo Dhaweeyey Ururka Dhallinyarada ee MIDNIMO[:] – KULMIYE Party
Xisbiga KULMIYE oo soo Dhaweeyey Ururka Dhallinyarada ee MIDNIMO[:]
HomeXisbiga KULMIYE oo soo Dhaweeyey Ururka Dhallinyarada ee MIDNIMO[:]
Hargeysa(Xisbiga KULMIYE)-Xisbiga midnimada iyo horumarinta Somaliland ee KULMIYE, ayaa soo dhaweeyey ururka dhallinyarada ee MIDNIMO oo si rasmi ah maanta xisbiga ula midoobay.
Munaasibadda soo dhaweynta ururka dhallinyarada ee MIDNIMO oo lagu qabtay Hoolka Cali Maarshaal ee xarunta xisbiga KULMIYE, ayaa wax aka qaybgalay guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, qaar kamid ah ku-xigeennadiisa, xoghayaha guud ee xisbiga, wasiirro, siyaasiyiin, hoggaannada heer qaran ee haweenka iyo dhallinyarada, xubnaha ururka dhallinyarada ee MIDNIMO, taageerayaashooda iyo marti-sharaf kale, waxana halkaas laga jeediyey hadallo lagu soo dhaweynayey ururka cusub ee la midoobay KULMIYE.
Guddoomiyaha gobolka Maroodi-jeex ee xisbiga KULMIYE Md. Maxamed Iid Dhimbiil, ayaa ugu horrayn soo dhaweeyey ururka Dhallinyarada ee MIDNIMO oo la midoobay KULMIYE, waxana uu sheegay inay xisbi ahaan diyaar u yihiin inay ka faa’iidaystaan maskaxda, maanka iyo muruqa bahda cusub ee xisbiga kusoo biirtay.
Xubno firfircoon oo kamid ah ururka dhallinyarada ee MIDNIMO oo halkaas ka hadlay, ayaa si qoto dheer u sharraxay sababaha ay ku doorteen xisbiga KULMIYE, waxana ay sheegeen inay si mug leh ugu qanceen waxqabadka xukuumadda KULMIYE, isla markaana ay hiil iyo hooba la garab geli doonaan sidii uu KULMIYE mar labaad talada dalka ugu guulaysan lahaa.
Marwo Nimco Cabdiraxmaan iyo Ilhaan Axmed oo kamid ah xubnaha ururka dhallinyarada ee MIDNIMO oo halkaas ka hadlay, ayaa sharraxay sida ay urur ahaan uga fikireen ku biiritaankooda xisbiga KULMIYE, waxana ay tilmaameen inay urur ahaan isku qanciyeen in xisbiga kaliya ee ay la jaanqaadi karaan uu yahay KULMIYE.
Guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee MIDNIMO Md. Xasan Bashiir iyo Agaasimaha guud ee ururka Md. Cabdikariin Xasan oo iyaguna halkaas ka hadlay, ayaa si waafi ah uga mahadnaqay saraakiisha xisbiga KULMIYE ee heer gobol iyo heer degmo oo si hufan xisbiga ugu soo dhaweeyey, waxana shaaciyeen inay xil weyn iska saari doonaan sidii uu murrashax Muuse Biixi hoggaanka dalka ugu guulaysan lahaa.
Siyaasi Axmed Xasan Cigaal, Cabdikariin Axmed Maxamed (Xinif) iyo siyaasi Maxamuud Raage oo kamid ah xisbiga KULMIYE oo halkaas hadallo ka jeediyey, ayaa dhallinyarada MIDNIMO si weyn ugu mahadnaqay, waxana ay ka codsadeen inay kor u qaadaan wada-shaqaynta ay xisbiga KULMIYE la leeyihiin inay dedaalka ay ugu jiraan sidii guusha xisbiga looga wada midho-dhalin lahaa.
Afhayeenka xisbiga KULMIYE Md. Xasan Maxamed Cali (Gaafaadhi) iyo xoghayaha guud ee xisbiga Md. Xasan Siciid Yuusuf oo madasha ka hadlay, ayaa iyaguna soo dhaweeyey bahda dhallinyarada ee MIDNIMO oo iskood u go’aansaday inay ka qaybqaataan dhismaha xisbiga KULMIYE, waxana ay ballan ku qaadeen in afkaarta dhallinyarada iyo aragtiyahoodaba lasoo dhaweyn doono.
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, ahna murrashaxa xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi oo madasha soo gunaanaday, ayaa si kal iyo laab ah usoo dhaweeyey dhallinyarada ku midoobay MIDNIMO, waxana uu kula dardaarmay inay horumarinta dalkooda iyo ka midho dhalinta himilada guud ee qaranka u tafo-xaytaan.